बुवाको उपचार खर्च जुटाउन १७ बर्षिय छोरी सफारी चलाउदै, घर पुग्दा देखियो यस्तो विजोग ! भिडियो हेरेर शेयर गर्नुहोला – PathivaraOnline
Home > समाचार > बुवाको उपचार खर्च जुटाउन १७ बर्षिय छोरी सफारी चलाउदै, घर पुग्दा देखियो यस्तो विजोग ! भिडियो हेरेर शेयर गर्नुहोला
बुवाको उपचार खर्च जुटाउन १७ बर्षिय छोरी सफारी चलाउदै, घर पुग्दा देखियो यस्तो विजोग ! भिडियो हेरेर शेयर गर्नुहोला
झापा, दमक । उर्लाबारी /उनी विद्यालयको नियमित छात्रा हुन् । कक्षा १२ मा पढ्छिन् । १७ वर्ष पुगिन् । पढाइ औसत छ । शिक्षा संकाय लिएकी छन् । विद्यालय र घर आउजाउमा उनकौ दैनिक चल्दै थियो ।हिजोआज दैनिकी फेरिएको छ । विद्यालय नियमित हुन छाड्यो । पुरै कक्षा लिन पाउदैनिन् । सुस्त मनस्थिती भएकी बहिनी, एउटा मृगौला निकालेर थलिएकी आमा अनि कलेजोमा समस्या आएपछि थलिएका बुवाको हेरचाह र परिवारको जिम्मेवारबोध थपिएको छ ।९ बजे टिफिन हुन्छ ।
बुवा बिरामी भएर थलिएपछि उनको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ । उपचारका लागि १२ लाख खर्च हुने चिकित्सकले बताएपछि खर्च जाेहाेका लागि सफारी कुदाउन थालेकी हुन् ।अम्बिका हिजोआज बुवाको उपचारका लागि सफारी कुदाउन थालेकी छन् । तीन वर्षसम्म बुवाको उपचार गर्दा जयजेथा सकिएपछि भट्टराई परिवारमा यतिबेला पीडा थपिएको छ ।भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पतालले २२ दिनको अन्तमा १२ महिनासम्म एक लाख रुपैया प्रतिगोटा पर्ने सुई लगाएपछि रोग निको हुने जनाएको छ । भिडियो हेर्नुहोस:
यी पाँच प्रकारका व्यक्ति, जसको घरमा धनको बास हुँदैन